हरेक दिन ८ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताको मृत्यु, चिहानमा परिणत हुदै फेसबुक – kollywood hungama
हरेक दिन ८ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताको मृत्यु, चिहानमा परिणत हुदै फेसबुक
सोसल मिडिया साइटहरु चिहान बन्दै गैरहेका छन् । एक रिपोर्ट अनुसार आगामी ४० वर्षभित्रमा जिवित भन्दा मृतक फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बर हुनेछ । एक तथ्यांक अनुसार फेसबुकमा ३ करोड अकाउन्ट यस्ता मानिसका छन् जसको मृत्यु भैसकेको छ । हरेक दिन ८ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अझ रोचक त के भने सन् २०६० सम्ममा फेसबुक प्रयोग गरिरहेका जिवित मानिसहरुको तुलनामा मृत्यु भैसकेका फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बर हुनेछ । आखिर अवस्था यस्तो हुँदा पनि मृतकको फेसबुक अकाउन्ट किन डिलिट गरिँदैन त ?
हामीले देखेकै कुरा हो कुनै मृतकको फेसबुकको टाइमलाइनमा मृतकका शुभचिन्तक, साथीभाई आदिले यस्ता शव्दहरु लेखेका हुन्छन् मानौँ त्यो व्यक्तिले तत्कालै रिप्लाई देओस् । मरेको मानिसको टाइमलाइनमा जन्मदिन तथा कुनै विशेष दिनको शुभकामना मात्र होइन फ्रेण्ड रिक्वेस्ट समेत पठाउँछन् मानिसहरु । मरेका मानिसका सोसल मिडिया अकाउन्टहरु डिलिट नहुँदा डिजिटल चिहान खडा भैरहेको छ । तर यसको एउटा सकारात्मक पाटो पनि छ । त्यो के भने मृतकको सम्झना तथा विरासतलाई जोगाईराख्नका र नयाँ पुस्तालाई त्यस व्यक्तिको इतिहाससँग जोडिराख्नका लागि यो भन्दा उत्कृष्ट मञ्च अरु छैन ।
Previous सुतेर बिउझिँदा ३२ वर्षकी महिला १५ वर्षे किशोरी बनिन् ? यस्तो छ रहस्य
Next १३ सय वर्षदेखि जमिनमा पाईला नराखेको एउटा यस्तो समुदाय